Lithophany: ihe ọ bụ na otu esi eme ya na mbipụta 3D | Akụrụngwa n'efu
N'azụ aha a dị omimi na-ezochi ụzọ mara mma nke na-anọchi anya nka. Na lithophany na-enwetawanye ndị na-eso ụzọ n'ime ụwa nke onye mere na mbipụta 3D. Jiri ya ka ị nwere ike ibipụta ụdị ihe nkiri niile, foto onwe gị, eserese, ọdịdị, ma ọ bụ ihe ọ bụla batara gị n’uche.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị mụtakwuo banyere ụzọ a isi eme ihe na lithophany, n'isiokwu a ị ga-amụta ihe ọ bụ, esemokwu dị iche iche na usoro ndị ọzọ dịka lithography, yana otu ị ga - esi malite ịmepụta atụmatụ nke gị Nkọwa 3D.
1 Kedu ihe bụ lithophany?
1.1 Lithophany na Lithography: ọdịiche
2 Otu esi eme lithophany na 3D na-ebi akwụkwọ
Kedu ihe bụ lithophany?
La akwụkwọ ọ bụ ụdị nke ntule nke ihe oyiyi na ụdị na-eji ìhè. A na-ejibu ọkụ ọkụ, ìhè anyanwụ ma ọ bụ nke kandụl. Ka ọ dị ugbu a, a na-eji ọkụ bọlbụ. Kedu ụzọ ọ bụla, isi iyi ọkụ ga-agafe na mpempe akwụkwọ nwere usoro silkscreens nke semitransparent iji kpụzie ihe oyiyi ahụ.
Echiche bụ inwe ọkpụrụkpụ dị iche iche na foil nke mere na ìhè dịgasị opacity, na-amụba ụfọdụ darker ebe na ndị ọzọ ọzọ mbụ. Ihe si na ya pụta bụ ihe mara mma, ọkachasị iji ihe anọ chọọ ụlọ mma, ma ọ bụ maka oriọna maka ime ụlọ nke ụmụaka, wdg.
Na mbụ, nke a osise emechara ya n'ụdị wax. Mgbe ahụ, a malitere iji ihe ndị ọzọ, dị ka poselin. Ugbu a, a pụkwara iji ọtụtụ ihe ndị ọzọ, dị ka polyamide polymers ma ọ bụ plastik nke ndị na-ebi akwụkwọ 3D.
na XIX narị afọ Usoro a ga - ewu ewu na mba dịka Germany na France, iji gbasaa na Europe mgbe e mesịrị. Ọtụtụ na-arụtụ aka na Baron Bourending dị ka onye okike ya, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere akụkọ ntolite ya, ị kwesịrị ịmara na enwere ụlọ ihe ngosi nka zuru oke nke ewepụtara maka nka a na Toledo, Ohio (USA), na Blair Museum of Lithophanies.
Lithophany na Lithography: ọdịiche
Fọdụ na-emegharị lithophany na ihe omumu, Ma ha abụghị otu. Lithography bụ ụdị ochie nke ibipụta akwụkwọ (nke a ka na-eme taa) iji nwee ike ibipụta ụdị ma ọ bụ onyonyo n’elu okwute ma ọ bụ ụdị ihe ndị ọzọ n’ụzọ dị larịị. N'ezie, aha ya sitere n'ebe ahụ, ebe lithos (nkume) na graphe (ịbịaru).
Site na usoro a ị nwere ike mepụta oyiri nke oru, ma nwekwara nnukwu mpaghara ntinye akwụkwọ na ntanetị nke ibi akwụkwọ, ebe a ka na-eji lithographs ebi akwụkwọ.
Kama, lithophany na-eji lithography ma ọ bụ mbipụta 3D iji nwee ike ịmepụta ebe kachasị sie ike na nke kachasị njọ, na ndị dịkarịsịrị ala na ndị kacha nwee translucent. Mana usoro a chọrọ ìhè iji nweta nsonaazụ.
Otu esi eme lithophany na 3D na-ebi akwụkwọ
Iji nwee ike ịmepụta ọrụ ị na-arụ nke ị na-achọghị ịchọ nka maka nka ma ọ bụ ịse ihe, ị ga-achọ naanị otu 3D ebi, filament, a PC, na ihe kwesịrị ekwesị software, na ihe oyiyi ị chọrọ ịnọchi anya ya. Ọ dịghị ihe ọzọ karịa nke ahụ ...
Banyere software maka mepụta lithophany, ị nwere ike iji ọtụtụ n'ime ha, gbanwee ihe onyonyo ka ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị maka lithophany na delaminator maka mbipụta 3D. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike iji ngwa weebụ ị nwere ike iji na sistemụ arụmọrụ ọ bụla na ihe nchọgharị weebụ dakọtara.
A na-akpọ ngwa a 3dp ị nwere ike nweta njikọ a. Ozugbo inwetara ngwa weebụ a, ị ga-agbaso usoro ndị a:
Pịa Images ma hoputara onyonyo ichoro igbanwe ya na lithophany.
Ozugbo emere ihe oyiyi ahụ, ugbu a model họrọ ụdị ị masịrị kachasị ndị niile enwere ma pịa Refresh iji nweta ume.
Ugbu a gaa na taabụ Settings. Ga-ahụ ọtụtụ nhọrọ:
Ntọala .dị: iji hazie ihe nlereanya na-amasị gị.
Oke kachasị (MM): ga-abụ ogo nke lithophany.
Ọkpụrụkpụ (MM): na oke a ị na-egwu na ọkpụrụkpụ nke mpempe akwụkwọ. Emela ka ọ dị gịrịgịrị ma ọ bụ na ọ ga-emebi emebi.
Oke (MM): nhọrọ iji mepụta ókè na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ etiti. Ọ bụrụ na ịchọghị, tọọ ya na 0.
Ihe kachasị mkpa (MM): ị na-egwu ọkpụrụkpụ nke pikselụ nke foto ahụ ka obere ma ọ bụ obere ìhè na-agafe na mpaghara kachasị mkpa.
Vector kwa pikselụ: Ihe dị elu karịa, ọ ka mma mkpebi ahụ, mana enwere ihe egwu na ọ bụrụ na ọ dị oke elu, a gaghị eme ibe ahụ. I nwere ike ịhapụ ya n’ihe dịka 5.
Isi / Omimi Omimi: Ọ na-emepụta isi na mpempe akwụkwọ maka nkwado ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị na-eme ọdịdị ọzọ, dị ka mpempe akwụkwọ gburugburu, ị gaghị achọ isi a ka o guzoro.
Usoro: ọ ga-emepụtakwu curvature na mpempe akwụkwọ. Nwere ike itinye 360º ka ọ na-apụta cylindrical. Ezigbo nhọrọ maka oriọna.
Ntọala Foto: iji hazie onyonyo ka ọ dabara nke ọma.
Ezigbo Foto / Foto na-adịghị mma: A na-eji ya eme ka foto ahụ pụta ma ọ bụ banye n'ime, dịka ịchọrọ. Nke ahụ bụ, nduzi nke enyemaka.
Onyogho gbanyụrụ / enyo enyo n’elu: na-eje ozi iji mepụta mmetụta enyo.
Tụgharịa Image Off / tụgharịa Image On: i nwere ike tụgharịa oyiyi ahụ.
Ntuziaka ume / ume na Image Pịa: Ọ bụrụ na ịlele ya, mgbe ị na-aga na taabụ nlereanya ọ ga-emelite na-akpaghị aka.
Tinyegharịa X Gụọ: na-eme mbipụta kwụ ọtọ.
Tinyegharịa ma gụọ: na-eme ka vetikal mbipụta.
Mirror imegharị Gbanyụọ / Mirror ikwugharị On: tinye mirror mmetụta.
Tụgharịa Tinyegharịa Gbanyụọ / tụgharịa Tinyegharịa na: tinye tụgharịa mmetụta.
Budata Ntọala: ebe hazi faịlụ nbudata.
Ọnụọgụ abụọ STL / ASCII STL: otu esi echekwa faịlụ STL. Kwesịrị ịhọrọ ọnụọgụ abụọ ka mma.
Manual / Na Ume Ọhụrụ: iji budata aka ma ọ bụ oge ọ bụla ịme ume. Onwe ya, ọ ka mma na usoro ntuziaka, ka ị wee budata mgbe ị mechara ya.
Mgbanwe na ha gị imewe ruo mgbe ọ bụ dị ka ị chọrọ n'ezie, dabere na ikpe gị.
Ozugbo i mechara ya, pịa bọtịnụ ahụ Budata site na ntaneetị maka STL ka ebudatara.
Ozugbo emerechara nke ahụ, ugbu a bụ oge mbubata STL maka ibipute ihe eji ebi 3D.Y nwere ike iji ọ bụla dakọtara software na usoro a maka mbipụta 3D. Usoro ndị ọzọ ga-abụ ibipụta ihe nlereanya ahụ, ma chere ka ọ gwụ.
Na njedebe, ị nwere ike iji bulbs ot, ọkụ nke kandụl, Ọkụ ọkụ, jiri agba dị iche iche nke ọkụ, wdg. Nke a bụ ihe gbasara ụtọ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Lithophany: ihe ọ bụ na otu esi eme ya na mbipụta 3D
Ahụmịhe Virtual OpenEXPO: Chema Alonso na-atụle DeepFakes na ihe ịma aka nke cybersecurity